Yiba Thick Cooper PCB-Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Fumax -- Inkampani ekwaziyo ukwenza uluhlu olubanzi lweemveliso zobhedu zePCB.Ngobutyebi bamava, sidume ngokuvelisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu kakhulu kubathengi bethu.Kwaye iFumax iyakwazi ukwenza ngokwezifiso iPCB yobhedu engqingqwa ukuze ikwazi ukwanelisa iimfuno zabo bonke abathengi.
Uluhlu lwemveliso ye-Thick Cooperer PCB enokuthi iFumax ibonelele:
*IiPCB ezinomaleko ukuya kuthi ga kwi-48
* Alu core, kwakhona iipleyiti-ngokusebenzisa
*Umfanekiso othe ngqo weLaser (LDI)
* IiMicrovias ukusuka kwi-75µm
* Iimfama- kwaye waNgcwaba-Vias
* NgokuPlaga / Ukupakisha
* Umaleko (1-14 umaleko);
* Ubungakanani bePCB (Ubuncinci.10*15mm, Max.508*889mm）
* Ubukhulu bebhodi egqityiweyo (0.21-6.0mm);
* Ubungqingqwa bobhedu obuncinci (1/3 OZ (12um));
* Ubukhulu obugqityiweyo bobhedu (6 OZ);
* Umkhondo wokulandelela ububanzi/isithuba (umaleko ongaphakathi:Icandelo 2/2mil, iyonke 3/3mil;Umaleko wangaphandle: Icandelo 2.5/2.5mil, iyonke 3 / 3mil）;
* Ukunyamezela ubungakanani bobungakanani (± 0.1mm);
* Unyango lwangaphandle (HASL/ENIG/OSP/LEAD FREE HASL/GOLD PLATING/IMMERSION Ag/IMMERSION Sn）;
* Ukunyamezelwa koLawulo lokuNgena (± 10%, 50Ω nangaphantsi: ± 5Ω);
* Umbala weMaski yeSolder (luhlaza, luhlaza, bomvu, mhlophe, mnyama)
I-PCB yobhedu eshinyeneyo iyakwazi ukuthwala ngoku ngakumbi ngeengcingo xa kuthelekiswa nokusebenzisa ezinye izinto zobhedu ekwenzeni iingcingo.Kwaye ukusetyenziswa kobhedu PCB ivumela ukwabiwa ngokulinganayo amandla thermal kwiingcingo kananjalo kwandisa amandla iingcingo kwindawo yoqhagamshelo.Kwakhona benza kube lula kwaye kwenzeke ukwenza izixhobo ezincinci.Oku kungenxa yokuba iingcingo zinokusongwa ngokulula ukuba zidlulelane kwaye zivumele ukudala indawo enkulu kwizixhobo ezincinci.
Ubhedu olunzima lunokusetyenziselwa iinjongo ezahlukeneyo, kubandakanywa, kodwa kungaphelelanga apho, ukulungiswa kwamandla aphezulu, ukutshatyalaliswa kobushushu, iinguqu ezicwangcisiweyo, abaguquli bamandla, ikhompyutha, umkhosi, ukutshaja isithuthi sombane, inkqubo yokutshintsha igridi yamandla, njl.
* Izixhobo zokuwelda
* Abavelisi bePaneli yeSolar
* Ubonelelo lwamandla
* Ukuhanjiswa kwamandla oMbane
* Abaguquleli baMandla
IFlex PC Ibhodi yeSekethe eprintiweyo Odm PCba IPcb Fabrication kunye neNdibano IPcb enamacala amabini IRigidFlex Pcb